Hello Nepal News » मध्यरातमा भित्र बैठक चलिरहँदा बाहिर फ्यानहरूको नारा–जुलुस : हेरौं आठ तस्बिरमा
मध्यरातमा भित्र बैठक चलिरहँदा बाहिर फ्यानहरूको नारा–जुलुस : हेरौं आठ तस्बिरमा
स्पेनिस बार्सिलोनाका फरवार्ड लिओनल मेस्सीले अघिल्लो दिन (मंगलबार) अप्रत्यासित रूपमा क्लब छाड्ने निर्णय गर्र्दै क्लबलाई जानकारी पठाए । यो खबर ब्रेक भएपछि विश्व फुटबल जगत एकाएक तरंगित भयो । मेस्सीले २० वर्षदेखि रहँदै आएको क्लब छाड्ने निर्णय खबर छिनभरमै फैलियो ।
मेस्सीले ‘ब्युरोफ्याक्स’मार्फत् क्लब छाड्न चाहेको कुरा क्लबलाई जानकारी गराएपछि बार्सिलोनाको बोर्डको आकस्मिक बैठक रातको समयमा डाकियो । बार्सिलोनाको कार्यालयमा बोर्डको आकस्मिक बैठक चलिरहँदा बाहिर मिडियाको घुइँचो थियो । साथै, फ्यानहरूको उपस्थिति एकैछिनमा बाक्लियो । भिड बढेपछि स्थानीय प्रहरीले भिड हटाउन सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गर्नु परेको थियो ।
त्यत्ति मात्रै हैन, मेस्सीले क्लब छाड्ने निर्णय गरेपछि क्लबका सञ्चालकसँग क्रुद्ध बनेका फ्यानहरूले भित्र बैठक चलिरहँदा बाहिर नारीबाजी चर्काए । मेस्सीलाई क्लबमै राख्न माग गर्दै क्लब अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमेउको राजीनामा मागियो । मेस्सीको जर्सी लगाएका सयौं फ्यान कोरोनाको त्रासबीच पनि बार्सिलोनाको कार्यालय बाहिर पुगेर धर्नामा उत्रिए ।
मेस्सीले क्लब छाड्ने निर्णय लिनुका पछि क्लब सञ्चालक नै मुख्य कारण रहेको बताउँदै फ्यानहरूले अध्यक्ष बार्टोमेउविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे । उनीहरूले ‘वि वान्ट मेस्सी’, ‘बार्टोमेउट आउट’ भन्दै नारा–जुलस गरेका थिए । कार्यालयभित्र मेस्सीको निर्णयमाथि बोर्डको बैठक जारी रहँदा बाहिर मेस्सीको पक्षमा र क्लब अध्यक्षको विरुद्धमा नाराबाजी जारी थियो ।
त्यसबेलाका विभिन्न भिडियो फुटेज र तस्बिरहरू अहिले सामाजिक सन्जालहरूमा भाइरल बनिरहेका छन । मेस्सीलाई कुनै पनि हालतमा बार्सिलोनामा राख्न माग गर्दै फ्यानहरूले जर्सी, ब्यानरसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । फ्यानले सामाजिक सन्जालमा ट्रेन्डिङ नै चलाइरहेका छन् भने बार्सिलोना सहरको ठाउँ–ठाउँमा मेस्सीको पक्षमा ब्यान र पोस्टरहरू टाँगेका छन् ।
हेरौं केही तस्बिहरू :
प्रकाशित मिति १० भाद्र २०७७, बुधबार १५:४६
‘‘बार्सिलोनाको व्यवहारबाट स्वारेजलाई चोट परेको छ’’
करेला खान मन नपराउने एकपटक यो पढौं !
स्वारेजले जिते कोरोनालाई : मैदान फर्किन तयार
यी हुन् युरोपा लिगमा आज हुने महत्त्वपूर्ण खेलहरू !
जानी राखौं : अरूका यी ६ समान, जुन भुलेर पनि प्रयोग नगर्नुहोस्
च्याम्पियन्स लिगमा आज ८ खेल हुँदै : बार्सिलोना र युभन्टेस पनि खेल्दै
रमेश प्रसाईंले यी युवतीसँग कस्ने भए लगनगाँठो
च्याम्पियन्स लिग : मोन्चेङ्लाडवाचविरुद्ध इन्टर मिलान ‘गर कि मर’को अवस्थामा